Baccarat - Xeerarka Ciyaaraha iyo Talooyin Xiiso leh - CasinoAdvisor.eu
Ciyaar casino ah oo leh taariikh hodan ah, baccarat ayaa xitaa ka dheeraatay roulette. Baccarat wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Talyaaniga waxaana markii dambe lagu soo bandhigay Faransiiska illaa 1483 - 1498. Ciyaartaan loo yaqaan 'casino' macnaheedu maahan qof walba inuu yaqaan, kuwa jecel filimada James Bond waxay u badan tahay inay arkeen ciyaartan casino ee filimka Dr. No iyo Golden Eye Baccarat runti maahan ciyaar adag oo la barto gebi ahaanba. Boggan waxaan fiirineynaa xeerarka baccarat iyo punto banco. Intaa waxaa dheer, waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad iskudaydo baccarat bilaash. Sidan ayaad isla markiiba u adeegsan kartaa sharciyada ciyaarta ee aad soo baratay. Baccarat ama punto banco waxaa lagu bixiyaa ku dhowaad casino kasta oo khadka tooska ah lagu ciyaaro, waxaad go'aamin kartaa sharad kasta oo ciyaar ah haddii aad doorato ciyaar lacag dhab ah. Dheeraad ah ee kulankaan naadiga ah ayaa ah geeska guriga hooseeya ee casino-ka internetka leh.
Dabcan waxaad dooneysaa inaad ogaato qiimaha saxda ah ee kaararka kala duwan. Qiimaha kaararka lagu ciyaaro ayaa ka duwan, tusaale ahaan, blackjack. Hoos waxaan ku qori doonaa kaararka kala duwan ee ciyaarta iyo qiimaha loogu talagalay.
Ace 1 dhibic
Nambarada 2 illaa 9, sidoo kale waxay u qalmaan 2 ilaa 9 dhibcood ciyaarta
10, Jack, Queen iyo King waxay mudan yihiin 0 dhibcood
Laakiin iska jir, lambarradan had iyo jeer iskuma darin. Xilliga wadarta qiimaha wadajirka ah uu ka weyn yahay 9, 10 ayaa laga jaray. Ilaa lambarku udhaxeeyo 0 iyo 9 markale. Marka tirada ugu dambeysa ee baccarat iyo punto banco had iyo jeer waa inta udhaxeysa 0 iyo 9.
Xeerarka ciyaarta ee gaarka ah ee khuseeya ciyaaryahanka
Inta ciyaarta lagu jiro ma lihid xulasho aad ku qaadato kaar kale ama aad ku sii wadato. Xulashooyinka ayaa lagu sii cayimay qawaaniinta ciyaarta wax saameyn ahna kuma lahan tan, marka laga reebo dabcan meesha aad miiska saarto miiskaaga. Sharciga gaarka ah ee khuseeya ciyaaryahanka khamaarka waa sida soo socota: Haddii ciyaaryahanka uu leeyahay wadarta tirada dhibcaha u dhexeeya 0 iyo 5, wuxuu qaataa kaarka 3aad. Haddii ciyaaryahanka uu haysto wadarta dhibco u dhexeeya 6 iyo 7, wuu dhaafi doonaa.
Xeerarka ciyaarta gaarka ah ee khuseeya bangiga
Xeerarka bangiga waxyar baa ka ballaaran oo waxay leeyihiin sharciyo iyo waxyaabo ka reeban. Haddii ciyaaryahanka uu heysto kaliya 2 kaar, markaa bangigu wuxuu kaliya qaataa gacantiisa oo wuxuu u dhaqmaa si waafaqsan qaab isku mid ah sida ciyaaryahanka. Tan macnaheedu waxa weeye in bangigu qaato kaarka 3aad oo qiimihiisu u dhexeeyo 0 iyo 5, oo isku laaban haddii qiimaha uu yahay 6 ama 7. Si kastaba ha noqotee, marka uu ciyaartoygu qaato kaarka 3aad, xeerarka ciyaarta ayaa u sii ballaadhaya baanka
Haddii ciyaaryahanka loola macaamilo 2 ama 3, baanka ayaa qaadanaya kaar kale oo leh dhibco 0 ilaa 4 wuxuuna u gudbinayaa 5 ilaa 7 dhibcood.
Haddii ay dhacdo in ciyaaryahanka uu 4 ama 5 ka helo ganacsadaha, baanka ayaa kaarka ka qaadaya 0 illaa 5 wuxuuna istaagayaa 6 illaa 7 dhibcood.
Haddii tani ay tahay 6 iyo 7 oo loogu talagalay ciyaartoyga casino, baanka ayaa kaarka ka qaadaya 0 illaa 6 wuxuuna istaagayaa 7 dhibcood.
Haddii lagaa siiyo 8 ka ganacsadaha, bangigu wuxuu qaadaa kaar 0 ilaa 2 wuxuuna ka gudbaa 3 ilaa 7 dhibcood.
Ugu dambeyntiina, haddii laacibku helo aros, kaarka wajiga, 10 ama 9. Kadibna ganacsadaha ayaa kaarka ka qaadaya 0 illaa 3 wuxuuna istaagayaa 4 ilaa 7 dhibcood.
Sababtoo ah sharciyadan iyo kuwa ka reeban baccarat iyo punto banco waxay u baahan karaan xoogaa tababar ah, waa fikrad fiican inaad ku tababarto qaabka ciyaarta bilaashka ah ka hor intaadan u ciyaarin lacag dhab ah.
Baccarat badanaa waxaad fursad u leedahay inaad dib u milicsato gacmihii horay loo ciyaaray. Tan waxaa badanaa loo soo bandhigaa iyada oo ah nooc ka mid ah qoraallada ciyaarta. Tan waxaad ku arki kartaa sida saxda ah dhibcaha, tusaale ahaan, 20-kii gacmood ee ugu dambeeyay ayaa ciyaaray. Badanaa tan waxaa lagu muujiyaa xarafka ugu horeeya, B (Banker) ama P (Ciyaaryahan), tani waxay muujineysaa cida guuleysatay wareegyadii hore. Dabcan, waagii hore waxba kama sheegayo wareegyada soo socda, baccarat iyo punto banco waxay sii wadaan inay noqdaan ciyaaro nasiib. Laakiin waxaa jira ciyaartoy khadka tooska ah ka ciyaarta oo jecel inay fiiriyaan natiijooyinkan isla markaana saadaal ku saleeyaan.
Xilliga kaarka cusub lagu daro, ciyaaryahan ama ganacsade. Waxaad isla markiiba arki kartaa sida tani u saameyneyso wadarta dhibcaha gacantaada. On casinos kala duwan internetka waxaad fursad u leedahay inaad ka doorato noocyo kala duwan oo ah baccarat ama punto banco. Mid ka mid ah farqiga u dhexeeya ayaa ah, tusaale ahaan, xaddidaadda sharadka, maxaa yeelay waxaa sidoo kale jira miisas ciyaaro gaar ah loogu talagalay rollers-ka sarreeya. Kuwani waa ciyaartoy casaan ah oo jecel inay karti u yeeshaan inay lacag badan ku sharraxaan kulan kasta. Badanaa xadkaani wuxuu gaaraa ugu badnaan € 1,000.
Iyadoo la adeegsanayo Baccarat, khamaaristaan ​​ugu badan ayaa xitaa ka sii sarreeya, khamaarka tooska ah mararka qaarkood waxaad ku sharxi kartaa € 5,000 ciyaar kasta. Si kastaba ha noqotee, waxbaa jira qof walba, haddii aad ku ciyaareyso qaddar yar sida € 0.10 ciyaar kasta ama round 5,000. Waxaa jira jadwal ciyareed oo sax ah oo loogu talagalay ciyaartoy kastaa oo casino ah oo ku yaal casinos-yada kala duwan ee internetka.
Xeelado caan ah oo loo yaqaan 'baccarat' iyo punto banco
Waxaa jira dhowr istiraatiijiyad caan ah oo ku jira wareegga baccarat iyo punto banco. Si kastaba ha noqotee, xeeladahani ma dammaanad qaadayaan faa'iido, waxay weli tahay ciyaar fursad. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan tan istiraatiijiyadda baccarat.
Ciyaartoyda Casino waxay jecel yihiin inay soo bandhigaan qaababka ciyaarta casino. Istaraatiijiyaddani waxay haddaba ku saleysan tahay dib u eegista ciyaarta inta ugu macquulsan, si loo arko haddii qaabab la ogaan karo. Sharadka ayaa markaa la kordhiyaa marka qofku ku qanco in natiijo cayiman la saadaalin karo. Si aan runta u sheegno, runti taas kuma rumaysanayno, maxaa yeelay sidaan horay u sheegnayba, ciyaar fursad ayaa loo yaqaan a ciyaar nasiib sabab. Adigu ciyaaryahan ahaan saameyn kuma lahan tan.
Markaad ku sharraxayso nidaamka Paroli ee baccarat ama punto banco, ciyaaryahanka ayaa si joogto ah u hagaajiya sharadka iyadoo lagu saleynayo natiijada ciyaarta ee la soo dhaafay. Xilliga uu ciyaartoygu guuleysto, sharadku waa la kordhiyaa wareegga xiga ee ciyaarta. Haddii mid laga badiyo, sharadka ayaa hoos loo dhigayaa wareegga xiga. Nidaamkani wuxuu u muuqdaa inuu ka jawaabayo aqoonsiga waxa loogu yeero qaababka.
Markaad u ciyaareyso istiraatiijiyad labalaab ah, waa la labanlaabayaa mar kasta oo ciyaaryahanka laga badiyo. Ciyaaryahanku wuxuu sii wadaa inuu tan ku celiyo tan iyo inta laga guuleysanayo, ka dibna sharadka ayaa dib loogu hayaa sharadka hore. Istaraatiijiyadda labanlaabku waxay leedahay khatar badan, maxaa yeelay ciyaaryahan ahaan waligaa ma waayi kartid inta jeer ee isku xigta. Qaddarka la sharaddeyn karo ayaa markaa isugeyn kara, sidaa darteed kuma talineyno inaad adeegsato istiraatiijiyaddan.
Bogga ugu weyn » Baccarat